AC akwado, jụrụ na-akwado, rechargeable Fan, DC Fan - HONGBO
HONGSHUO mkpoko nwetara nsogbu nwa oge, AYATER nyere m aka idozi ya na-adọ, ekele nke ukwuu ọma ọrụ! My mkpoko nwetara nsogbu nwa oge, AYA Ter nyere m aka ya na-adọ, prventing m ọnwụ, ekele nke ukwuu ọma ọrụ! My mkpoko nwetara nsogbu dozie ya na-adọ, prventing m ọnwụ, ekele nke ukwuu ọma ọrụ!
EC usoro ofufe
Mpụga rotor axial ofufe
obere axial ofufe
Ningbo Hongbo Weite Motor Co., Ltd. bụ a ọkachamara na-emepe emepe na n'ichepụta AC, DC axial Fans na-akwado ngwa. Anyị na ngwaahịa na-tumadi etinyere na akpaka akara ngwá, ike usoro, oche, ịgbado ọkụ ngwaọrụ, ọgwụ ngwa na ngwá network nkwurịta okwu ụlọ ọrụ na ndị ọzọ na IT akụrụngwa. Hongbo Fans nwere atụmatụ nke ọma na-achọ, nnukwu airflow, ala ụzụ na ogologo ndụ. Anyị ọma nwetara OA, RoHS ihu ọma. Onye ọ bụla mpempe Hongbo ngwaahịa bụ a crystallization nke Hongbo si mgbalị na amamihe. Mgbe ọtụtụ iri afọ nke mgbalị, Hongbo nwere a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ahịa n'ụlọ na mba ọzọ na anyị na ngwaahịa na n'ọtụtụ ebe, exported na Europe, America, Middle East, Africa, Southeast Asia na mba ndị ọzọ, otu nke anyị ngwaahịa kwụpụta na oge-okpono àgwà na South Korean ahịa.
17040 172x150x40 mm ise pupụtara axial Ọrụ ofufe utari ...
AC Fan 17050B2H 220V 172 * 150 * 51mm akanamde axial ofufe
20060 8 Inch Machine Ne Jụrụ Axial Fan 20 ...
© Copyright - 2010-2017: All Rights echekwabara. Atụmatụ - Apụta Products - Sitemap - Mobile Site
axial eruba ofufe, Metal Impeller Ọrụ Axial Fan , rechargeable ofufe , 80mm Fan Nche, plastic ofufe nche , Obere Fan , All Products